Esenboğa Airport Metro Route, Stations and Promotional Video - RayHaber
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီEsenboga လေဆိပ်မှာ Metro လမ်းကြောင်း, စခန်းများနှင့်ပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယို
03 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, တူရကီ, ဗွီဒီယို 0
Esenboga လေဆိပ်မှာ Metro လမ်းကြောင်း, စခန်းများနှင့်ပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယိုကို။ မြို့လယ်မြေအောက်ရထားစီမံကိန်းကထံမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့ရန်တူရကီအတွက် Esenboga လေဆိပ်မှာ 1 ဘီလီယံကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းမက်ထရိုစီမံကိန်းအားနိုင်ငံတကာအကြွေးအဆုံးအထိရောက်ရှိခဲ့သည်နှင့်အတူဆွေးနွေးပွဲများအတွက်အမျိုးသား Will Esenboga လေဆိပ်မှာနှင့်အတူဇူလိုင်လ 15 Kizilay ရင်ပြင်အကြားကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ငွေချေးနှင့်အတူဆွေးနွေးပွဲများအတွက်သင့်လျော်သောအဆိုပြုချက်ကိုကမ္ဘာ့ဘဏ် ပေး. , ဂျပန်ကုမ္ပဏီများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတုန်းပဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဖြစ်ကြသည်။
ESENBOĞA Metro AIRPORT ROUTE
ဆိုက်မှတစ်ဆင့် Pursaklar အတွက်ဇူလိုင်လ 15 လခြမ်းနီအမျိုးသား Will ရင်ပြင်မှစတင် Esenboga လေဆိပ်မှာမီထရိုစီမံကိန်းအတွက်, ပြပွဲအာကာသ, လေဆိပ်များနှင့်လှံတံညှနျကွားရလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Esenboga လေဆိပ်မှာမီထရိုလိုင်းဆိုဒ်များ၏ဝယ်လိုအားသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သညျ။ တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor နှေးသူတို့ကမြေအောက်ရထားထက်ပိုပြီးနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ဆိုက်ကနေတဆင့်လေဆိပ်သွားဖို့လမ်းကြောင်းထင်ကြေညာခဲ့သည်။ gitmeyeceğiစိတ်အားထက်သန်စွာသည့်ဆိုဒ်များမြေအောက်ရထားထွက်သွားစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော။
Metro AIRPORT ESENBOĞA7STOPS ထားရှိရေးဦးမည်
အဆိုပါ73 စုစုပေါင်းဘူတာရုံများတွင် Esenboga လေဆိပ်မှာ Metro မှာတဦးတည်းရထား၏ညှနျကွားပြောင်းလဲနိုင်သည်နှင့်ရထားသိုလှောင်ရုံလည်းလယ်ကွင်းများအတွက်အကူးအပြောင်းအချက်အဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့မျှော်လင့်ရသည်။ အသစ်ကလိုင်းပေါ်7ဘူတာရုံပြောပြီပါလိမ့်မည်: "
5- Akyurt အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပွဲခင်း,
6- Esenboga လေဆိပ်မှာ
YıldırımBeyazıtတက္ကသိုလ် 7- ။
ESENBOĞA Metro Integrated Line BE
နေ့စဉ် Metro Esenboga 700 အဆိုအရလူတထောင်ခရီးသည်စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ လိုင်းအရှည် 26 ကီလိုမီတာဖြစ်လိမ့်မည်။ Esenboga မီထရိုသည် wellhead Kecioren မီထရိုဘူတာရုံသို့ပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်လွှဲပြောင်းအဆိုပါ Esenboga လေဆိပ်မှာနှင့် bar မှာ Yildirim Beyazit တက္ကသိုလ်အတူတက်သွားပါလိမ့်မယ်။ AKM-ရောဂါ-လခြမ်း Kecioren Metro extension ကိုစီမံကိန်းကို (M4) နဲ့ Making တိုးတက်မှုမြေအောက်ရထားဟာလခြမ်းနီဌာနချုပ်ကိုတိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်။ မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုအဆိုပါမြေအောက်ရထားစီးတဲ့သူEsenboğaနိုင်ငံသားများပြီးစီးသောအခါကမြို့လယ်အားလုံးကိုမြေအောက်ရထားလိုင်းများကိုလွှဲပြောင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Metro အတွက် Esenboga လေဆိပ်မှာ၏လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲစေပါလိမ့်မယ် 15 / 01 / 2018 တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mustafa တူနာ, CNN သို့ Turk အစီအစဉ်တူရကီ Esenboga လေဆိပ်မှာအဆိုပါ 2023 စီမံကိန်းများအကြားတည်ရှိသည်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးအဆိုပါ Metro ၏လမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. ထုတ်ပြန်ချက်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တူရကီညုမြေအောက်ရထားပေါ်တွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအလုပ်ဖော်ပြလေဆိပ်, "ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲချင်ခဲ့တယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုလည်းသင့်လျော်သောတွေ့သည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းအားပြန်လည်ပြင်ဆင်မည်ဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းထားသည်။ အချိန်လူဦးရေတစ် busier လေဆိပ်မြေအောက်ရထားဖြစ်ပြင်ဆင်ထား၏ခြေရာခံ။ ဒီလိုင်းကို 36 ကီလိုမီတာခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကို 10-12 တစ်ဦးအပိုဆောင်းကီလိုမီတာနှင့်အတူလုပ်ဖို့ကပို, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ စီမံကိန်းဆက်ဆံရေးမျိုးညုအပြီးသတ်မည်သည့်အခါ၏မေးခွန်းကို "ငါမှားပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုပြောပြပါ။ ငါအနာဂတ်ကြွေးမြီငွေပေးချေမှုယူပါ။ တခြားဘယ်သူမဆို ...
Metro အတွက် Esenboga လေဆိပ်မှာ၏လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲစေပါလိမ့်မယ်
ပြည်နယ်လေဆိပ်အာဏာပိုင် Esenboga လေဆိပ်မှာ Express ကို Taxiway နှင့်တင်ဒါလေလံ၏ခါးစညျးရှေ့ဖုံးဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းစုဆောင်းခဲ့ကြ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (349) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (633) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)